galmudugnews.com » Maamulka Faroole oo Raisul wasaarihii xilka ka degay ku amray inuu ka baxo Puntland iyo xiisad ka taagan Boosaaso
Home » WARARKA » Maamulka Faroole oo Raisul wasaarihii xilka ka degay ku amray inuu ka baxo Puntland iyo xiisad ka taagan Boosaaso Maamulka Faroole oo Raisul wasaarihii xilka ka degay ku amray inuu ka baxo Puntland iyo xiisad ka taagan Boosaaso galmudug on
No Comment Views 162855Saraakiisha ciidanka Booliska maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa la sheegay iney amar ku siiyeen raisul wasaarihii xilka ka degay ee Somalia C/wali Maxamed Cali Gaas inuu isaga baxo magaladaas iyo degaanada Puntland, iyadoo xiisad arintaas ka dhalatayna laga soo sheegayo magaalada Boosaaso.
Xildhibaan C/wali Maxamed Cali Gaas oo tan iyo markii uu xilka wareejiyey socdaal ku marayey degaanada Puntland ayaa waxaa la sheegay in saaka Taliska ciidamada booliska Gobalka Bari iyo maamulka gobolkaasi ay si deg deg ah ugu yeereen iyagoo ku amray inuu isaga tago degaanadaas.
Maamulka Faroole ayaa ka carooday kulamo raisul wasaairihii hore uu magaalada Boosaaso kula yeelanayey odayaasha qabaailka beelo ka horjeeda xili kororsiga halka sano ah ee madaxweyne Faroole uu damacsan yahay inuu xafiiska ku sii joogo.
Xildhibaan C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale magaalada Boosaaso kulan kula qaatay Guddoomiyaha gobolka Bari C/samad Maxamed Galan kaasoo la sheegayo inuu ku dhamaaday fashil ka dib markii xildhibaan C/weli Gaas uu diiday dalab ka yimid gudoomiyaha gobolka oo ahaa inuu isaga tago magaalada.
Raisul wasaarihii hore ayey wararku sheegayaan inuu masuuliyinta Puntland si cad ugu sheegay inuusan degaanadas ka baxeynin, maadaama uu yahay nin reer Puntland Ah, waxaana arintan ay dhalisay xiisad dhinaca qabaailka ah oo laga cabsi qabo iney weji kale yeelato, waxaana amarkan degaanada Puntland looga saarayo C/weli Gaas la sheegaya inuu ka dambeeyo madaxweyne Faroole.
Ciidamo tirsan maamulka Faroole ayaa la sheegay iney habeen hore isku gedaameen dhisme ku yaala magaalada Boosaaso oo uu ku soo degay xildhibaan C/weli Gaas, iyagoo diiday in dhismahaas ay galaan odayaal iyo iyo siyaasiyiin doonayey iney kulan la qaataan raisul wasaarihii hore.
Xildhibaan C/weli Gaas ayaa waxaa la sheegay inuu arintaas si weyn uga carooday isagoo kulamo la qaatay saraakiisha Ciidamada Booliska magaalada Boosaaso, waxaana la sheegay in C/weli gaas laga dul qaaday ciidanka hoygiisa lagu wareejiyey ka dib markii uu ogolaaday amar sheegaya inuusan la kulmi Karin liis ay ku xusan yihiin magacyada illaa 13 qof oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgarad si weyn u diidan maamulka Faroole.
C/raxmaan Faroole madaxweynaha maamulka Puntland ayaa bilaabay inuu shacabka Puntland ku sanduleeyo iney aqbalaan xili kororsi hal sano ah oo uu damacsan yahay inuu xafiiska ku sii joogo ka dib markii ay u dhamaatay afar sanadood oo uu xilkaas hayey, waxaana Faroole uu adeegsanayaa ciidanka Puntland si uu u caburiyo siyaasiyiinta iyodadka ka soo horjeeda xukunka uu sida guracan ku raadinayo
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139379 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31878 hitsContact US - 30555 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26136 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25631 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25251 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23896 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23027 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22360 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22316 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21429 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21107 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21099 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20795 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19868 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19847 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19232 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18484 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17791 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17704 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17671 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16901 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16811 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15533 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15458 hits Home Contact US